स्थानीय बासिन्दाका लागि राप्ती हाइड्रोको आइपिओ आउँदै, जेठ २४ गतेदेखि बिक्री खुला गर्ने
काठमाडौँ । राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडले आयोजनाबाट असर पर्न सक्ने स्थानीय बासिन्दाका लागि साधारण सेयर निष्कासन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले यही जेठ २४ गतेदेखि प्रतिकित्...
arthasarokar.com . १ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
रिभर फल्स पावर लिमिटेडको सेयर रजिष्ट्रारमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त
काठमाडौँ । प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रिभर फल्स पावर लिमिटेडको सेयर रजिष्ट्रारमा नियुक्त भएको छ । सेयर रजिष्ट्रार सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि रिभर फल्स पावर लिमिटेड र प्रभु क्यापिटल लिमिटेडबीच सम्झौता भ...
बिन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले १५ लाख कित्ता आइपिओ जारी गर्दै, जेठ २० गतेदेखि आवेदन दिन सकिने
काठमाडौँ । बिन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले यही जेठ २० गतेदेखि प्रतिकित्ता रु. १०० अङ्कित रु. १५ करोड मूल्य बर...
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको नयाँ शाखा सञ्चालनमा, बेलायती राजदूत निकोला पोलिटद्वारा उद्घाटन
काठमाडौँ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडले नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौँमा आफ्नो नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त शाखा लाजिम्पाटबाट स्थानान्तरण गरिएको हो । शुक्रबार एक कार्यक्रमकाबीच ...
नीजि प्रयोजनका कार, जीप र भ्यानको आयात प्रतीतपत्र खोल्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन नाडाको आग्रह
काठमाडौँ । मिति २०७९ साल जेष्ठ १३ गते नेपालमा अटोमोवाइल क्षेत्रको योगदान र यस व्यवसायमा देखा परेका समस्याहरुलाई केलाउदै NADA PERSPECTIVE on Current Scenario- Restriction on Import for Passenger Au...
लुम्बिनी । नेपाल आयल निगमको भलवाडीस्थित डिपोमा आज लागेको आगो नियन्त्रणमा आएको छ । बिहान११ः४० बजेको तेल खनाउने क्रममा लु२ख २६५६ र लु२ख ५६८५ नम्बरको ट्याङ्करमा लागलागी भएका थिए । आगलागीबाट लु२ख २६५६ ...
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी बीच सम्झौता, दुई सरकारी संस्थाको व्यवसाय विस्तारमा सहयोग पुग्ने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड बिच तलबी खाता तथा पेशाकर्मी सरल कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत...
ट्रयाक खुलेको १४ वर्ष बित्दा पनि गरिएन सडक सुधार , सरोकारवाला निकायले ध्यान नदिएको गुनासो
गलेश्वर । म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाको प्रवेशद्वारदेखि भकुण्डेचौरस्थित वडा नं २ कार्यालयसम्म जोड्ने मोटरबाटोको ट्रयाक खुलेको १४ वर्ष भयो । वि.सं २०६५ मा ट्रयाक खुलेको सात किलोमिटर दूरीको यो सडक स्तर...
वाइरिङ सर्ट भएर ग्यास बुलेटमा आगलागी
चितवन । नारायणगढबाट मुग्लिनतर्फ जाँदै गरेको ग्यास बोकेको बुलेटमा आगलागी भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार भरतपुर महानगरपालिका–२९ को १५ किलोमा युपि १७ एटि ८६२७ नम्बरको बुलेटमा आज दिउँसो आगलाग...
कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइनको रुख कटानमा ढिलाइ, आयोजना निमार्णमा समस्या
कर्णाली । कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । आगामी भदौमा म्याद सकिन लाग्दा पनि आयोजनाले अहिलेसम्म रुख कटानको अनुमति पाउन सकेको छैन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रुख कटान...
आर्थिक स्थायित्वका लागि छनोटपूर्ण उपकरण प्रयोग गरिने, अर्थतन्त्रको पुनस्रुत्थानमा सघाउ पुर्याउने मुख्य उद्देश्य
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब कम गरी आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न ब्याजदरका साथै अन्य छनोटपूर्ण उपकरण प्रयोग गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले चालु आवको मौद्रिक...
शुक्रबारको सेयर बजार : नेप्से परिसूचक घट्दा पनि यी कम्पनीका लगानीकर्ताले मनग्य नाफा कमाए !
काठमाडौं । साताको कारोबारको पाचौँ दिन शुक्रबार नेप्से परिसूचक घटेक छ । बिहिबारको तुलनामा नेप्से परिसूचक १५.८२ अंकले घटेर २२२३.७८ बिन्दुमा पुगेको हो । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का अनुसार शुक्रबा...
शुक्रबार घट्यो सयेर बजार, १ अर्ब २९ करोडमाथिको कारोबार हुँदा नेप्से २२२३.७८ बिन्दुमा
यस्ता छन् नवनिर्वाचित प्रमुख साहको योजना (अन्तवार्ता)
काठमाडौँ । मुलुकको राजधानीसमेत रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साह ६१ हजार ७६७ मतसहित प्रमुखमा निर्वाचित भएका छन् । उनले सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उम...
दराजले गर्यो प्राउडली नेपाली अभियानको घोषणा, स्थानीय ब्रान्डहरूको प्रवर्द्धनमा मुख्य फोकस
काठमाडौँ । नेपालको अग्रणी अनलाइन बजार दराजले प्राउडली नेपाली – प्रमोटिङ नेपाली ब्रान्ड नामक आफ्नो नयाँ अभियान येही जेठ १३ बाट सुरु हुने घोषणा गरेको छ । कम्पनिको अनुसार, विगत र वर्तमान नेपाली बजारम...
अन्तर्राष्ट्रिय कारण नै इन्धनको मूल्य बढेको मन्त्री बडूको भनाई, १० महिनामा एक खर्ब बढीको इन्धन आयात !
काठमाडौँ । सरकारले रुस र युक्रेनबीच युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएकाले आन्तरिकरुपमा पनि मूल्य बढेको स्पष्ट पारेको छ । नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौताअनुसार नै...
‘आयल निगम निजीकरणको प्रचार शतप्रतिशत गलत, वित्तीय र व्यवस्थापकीय रुपमा प्रतिस्पर्धी बनाउँदैछौं’: उद्योगमन्त्री बडू
काठमाडौं । सरकारले नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्न लागेको भन्ने प्रचार गलत रहेको र शतप्रतिशत झुटो रहेको मन्त्री बडूले बताएका छन् । मन्त्री बडूले बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले निगम निजीकरण गर...
नीति तथा कार्यक्रम शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउने, आयात घटाउने निर्यात बढाउने उद्देश्य
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सदस्यले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मुलुकको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने गरी ल्याइएको टिप्पणी गर्दै कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा राष्...
अन्धाधुन्ध भएर सहकारीमा पैसा नराखौं, डुब्न सक्ला ! उमेश थापाको लेख
काठमाडौँ । पछिल्लो समय सहकारीहरुको स्थिति एकदैम नाजुक बनेको छ । सहकारीमा जम्मा गर्ने ठप्प हुदाँ घर भाडा तिर्ने र कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउन पनि हम्मेहम्मे भइरहेको बुझिन्छ । कति सहकारीहरुले कर्मचारीह...
अन्तर्राष्ट्रिय कारणले इन्धनको मूल्य बढेको मन्त्री बडूको भनाई, १० महिनामा एक खर्ब बढीको इन्धन आयात
पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर समायोजन गरेर मूल्य घटाउने सरकारको निर्णय, विद्युतको महसुलमा पनि सहुलियत दिने
काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर समायोजन गर्ने भएको छ । उद्योगमन्त्री दिलेन्द्र बडुले गत जेठ १० गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कर समायोजन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन् ।
घुम्ती गोठमा ६०० भेडा पाल्दै देवान, २५ लाख भन्दाबढी आम्दानी
गलेश्वर । रोजगारीका लागि सिङ्गापुर र मलेशियामा दुई दशक बिताएर स्वदेश फर्किएका म्याग्दीका एक युवा आफ्ना बाबु–बाजेको पेसालाई निरन्तरता दिन परम्परागत घुम्ती गोठमा भेडापालन गरेर मनग्य आम्दानी गर्नाका ब...
मुक्तिनाथ विकास र मेराकी होलिस्टीक वेलनेस रिट्रिट बीच सम्झौता, बैंकका ग्राहकहरुलाई विशेष छुट
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले आफ्ना भिषा डेविट कार्डवाहक तथा मोबाइल बैंकिङ ग्राहकहरुलाई थप सेवा दिन बूढानीलकण्ठ स्थित मेराकी होलिस्टीक वेलनेस रिट्रिट (Meraki Holistic Wellness Retreat )...
arthasarokar.com . २ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
मुल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार चल्न नसक्दा सहकारीहरुमा समस्या उत्पन्न : मन्त्री श्रेष्ठ
धुलिखेल । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले सहकारीहरु मुल्य, मान्यता, सिद्धान्त अनुसार चल्नु पर्नेमा जोड दिइन् । काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजित सुशासन प्रबर्द्धन र व्यवस्थापन ...
मौद्रिक नीतिको समिक्षाः वैधानिक तरलता अनुपात, बैंक दर र पुनरकर्जा दरहरुलाई यथावत राखिने (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेश्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा देखिएको विद्यमान दबाब कम गर्ने, बैंक दर र पुनरकर्जा दरहरुलाई य...
स्न्यापड्रागन पावोर र ६००० एमएएच ब्याट्रीको साथ रेडमी १० नेपाली बजारमा
काठमाडौँ । ग्लोबल टेक्नोलोजी लिडर शाओमीले रेडमी १० नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ। स्मार्टफोनको बजारमा हुने चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै सस्तो दरमा उत्कृष्ट उत्पादन ल्याउने लक्ष्यका साथ शाओमीले रेडमी १...
सामाजिक सञ्जालमार्फत एफपीओ जारीको प्रचार गर्ने न्यु मार्ग साइबर कलेजलाई बन्द गर्न सेबोनको निर्देशन !
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले एफपीओ निष्कासन गर्ने भन्दै प्रचारप्रसार गर्ने एक कम्पनीलाई तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा एफपीओ निष्कासन गर्ने भन्दै प्रचारप्रसार गर्ने ‘न्यु...
झापा । धान रोप्ने बेलामा रासायनिक मलको अभाव हुँदा झापाका किसान समस्यामा परेका छन् । हरेक खेतीको समयमा मलको अभाव भोग्दै आएका उनीहरुलाई यस वर्षको पनि धानखेतीका लागि पनि मल अभाव भएको हो । धान रोप्दा छ...
‘काठमाडौँलाई विश्वकै सुन्दर र उत्कृष्ट सहर बनाउँछु’ : नवनिर्वाचित प्रमुख साह
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको नवनिर्वाचित प्रमुख बालेन्द्र साहले नगरबासीसँगको सहकार्यमा काठमाडौँलाई विश्वकै सुन्दर र उत्कृष्ट सहर बनाउने बताएका छन् । राष्ट्रियसभा गृहमा आयोजना भएको निर्वाचन पर...
सिटिजन्स बैंक र बज रेस्टुरेन्ट बीच सम्झौता, बैंकका ग्राहकहरुलाई १०% छुट
काठमाडौँ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र सुर्खेत स्थित बज रेस्टुरेन्ट प्रा.लि. बीच सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहकहरूलाई छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो समझदारी पश्चात् सिटिजन्स बैंकका ...
विद्युत् सर्ट हुँदा एक घरमा आगलागी, नगद र सुनचाँदीसमेत जलेर नष्ट
बागलुङ । बागलुङ नगरपालिका–३ बोक्सेखाल्टाका जगन्नाथ गौतमको घरमा आगलागी हुँदा घर जलेर नष्ट भएको छ । गए राति विद्युत् सर्ट हुँदा भएको आगलागीबाट घरमा रहेका लत्ताकपडा, खाद्यान्न, नगद र सुनचाँदीसमेत जलेर...
एनसेल अजियाटा लिमिटेडले माग्यो २ पदका लागि कर्मचारी, यस्तो छ आवश्यक योग्यता तथा अनुभव (भ्याकेन्सीसहित)
Ncell Axiata Limited (Ncell) isapart of the Axiata Group Berhad, one of Asia’s leading telecommunication groups. Axiata has controlling stakes in market-leading mobile and fixed operators in the ...
कैकुखोला–खन्ती खण्ड कालोपत्र, पर्यटक र तिर्थयात्रीलाई आवतजावतमा सहज
लेते (मुस्ताङ) । उत्तर–दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरको बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको कैकुखोला–खन्ती खण्ड कालोपत्र भएको छ । मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–५ कैकुखोलाबाट गाउँपालिकाको केन्द्र...
महाकाली नदीमाथि दुईवटा झोलुङ्गे पुल निर्माण, ट्युबमार्फत आवतजावत गर्ने बाध्यताको अन्त्य
दार्चुला । दार्चुलामा नेपाल–भारत जोड्ने गरी महाकाली नदीमाथि दुईवटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । तुइन विस्थापनअन्तर्गत ती नदीमाथि पुल निर्माण गरिएको हो । व्याँस गाउँपालिका–६ बडुगाउँ र माल...
बिहिबारको सेयर बजार : मेगा बैंक लिमिटेडमा पोजेटिभ सर्किट, यी कम्पनीका लगानीकर्ताले पनि मनग्य पैसा छापे !
काठमाडौं । साताको कारोबारको चौथो दिन बिहिबार नेप्से परिसूचक बढेको छ । बुधबारको तुलनामा नेप्से परिसूचक ८.०३ अंकले बढेर २२३९.६० बिन्दुमा पुगेको हो । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ( नेप्से ) का अनुसार बिहिबार ...
बिहिबारको बजार अपडेट : यी हुन् बिहिबार सर्वाधिक सेयर कारोबार भएका दश कम्पनी
देश बोल्ने फोटो कथा : सडक सञ्जालले नजोडिएको नार्पाभूमिमा खच्चडबाट खाद्यान्न साम्रगी दुवानी गर्दै, गोरु जोत्दै स्थानीय किसान
काठमाडौं । देशभर विभिन्न घटना घट्छन् । केहि सामान्य समाचारका विषय हुन्छन्, केहि समाचारले असामान्य कम्पन पैदा गरिदिन्छन् । केहि तस्विर फगत तस्विरमात्र हुन्छन् भने केहि तस्विरले देश बोल्दछन् । हामी ह...
‘डेमो डे’ मा सहजको इन्क्युबेसन कार्यक्रमबाट छनौट भए ८ कृषि व्यवसाय
काठमाडौँ । सहज भनेर पनि चिनिने नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम एनएमडीपी दोस्रो चरणको कार्यक्रम ‘एग्रि विजनेस इन्क्युबेसन कार्यक्रम’ अन्तर्गत ८ ओटा कृषि व्यवसायमा आधारित आईडिया छनौटमा भएका थिए। एग्र...
नीति तथा कार्यक्रमले पेट्रोलियम पद्धार्थको विकल्प दिनुपर्ने र परम्परागत सीपमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरुले पेट्रोलियम पद्धार्थको विकल्प दिनुपर्ने र परम्परागत सीपमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझा...